Archives Publications - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Buug-gacmeedka 'Peace-Tandem' wuxuu isku daraa horudhac ku saabsan aragtida isku dhaca iyo talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo dabaqo habka barashada luqadda tandem.
Buug cusub oo uu qoray Werner Wintersteiner: "Barashada dib -u -fiirinta adduunka - codsi ku saabsan siyaasadda meeraha"
Buugga cusub ee Werner Wintersteiner, “Barashada dib -u -fikirka adduunka - codsi ku saabsan siyaasadda meeraha. Casharrada ka imanaya Corona iyo dhibaatooyinka kale ee jira, ”ayaa la heli karaa (Jarmalka). [sii wad akhriska…]
Buug cusub: Caddaalad Dib-u-Celintii Dib-u-Celinta
Janet Gerson iyo Dale Snauwaert waxay soo bandhigaan kaalin muhiim ah fahamkeenna ku aaddan caddaaladda colaadda ka dib oo ah qodob muhiim u ah anshaxa iyo caddaaladda adduunka iyada oo loo marayo sahaminta Maxkamadda Caalamiga ah ee Ciraaq (WTI). Horudhac bilaash ah oo hordhac ah Betty A. Reardon. [sii wad akhriska…]
Wac Cutubyada Buugga: Baridda Nabadda iyada oo la tirtirayo Rabshadaha
“Barashada Nabadda iyada oo la marayo Ciribtirka Rabshadaha” ayaa looga golleeyahay horumarinta nabadda ee dugsiyada iyo agagaarkeeda iyada oo kor loo qaadayo barashada nabadda iyo rabshadaha. Soo jeedinta waa in la sameeyaa: Noofambar 15, 2021. [sii wad akhriska…]
Buugga cusub ee "Waxbaridda Nabadda iyo Xuquuqda Aadanaha" wuxuu barayaa ardayda iyo barayaasha caqabadaha iyo fursadaha hirgelinta nabadda iyo waxbarashada xuquuqda aadanaha ee goobaha kala duwan ee adduunka. [sii wad akhriska…]
Buugga cusub ee “Renegades” wuxuu Dubsmash iyo TikTok u arkaa inay yihiin barbaarin dhaqan ahaan la xiriirta
"Renegades" waxay bixisaa hordhac ah aduunka barnaamijyada qoob ka ciyaarka ee warbaahinta bulshada iyadoo la iftiiminayo sida barnaamijyadan loogu adeegsan karo qaab waxbarid dhaqan ahaan ka jawaab celisa. [sii wad akhriska…]